Dhata Yekudzosera Turu. Dzorera Lost & Mafaira Akadzimwa.
DataNumen Data Recovery ndiro yakanakisisa data kudzoreredza chishandiso pasi. Inogona kupora lost uye bvisa mafaera uye maforodha pane ako madhiraivha zvakanyanya sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mune njodzi dhata
4.90 / 5 (kubva 1,650 mavhoti)
Sei DataNumen Data Recovery?
Chigadzirwa chako chaive chakanakisa uye chakaita iyo most! Asi ini handifunge kuti chero chinhu chinogona kudzoreredza iyo data ini lost. Yakadzorera zvandaive ndinazvo, izvo zvaive zvakawanda
Mai Mascha Fujimoto
Sarudza Kunobva Dhiraivha kana Dhisiki
Sarudza Kudzorera Sarudzo
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Data Recovery v2.4
Tsigira ese ese mafaera masisitimu, kusanganisira NTFS, FAT, FAT32 uye Ext2.
Kutsigira kudzoreredza mafaera lost nekuda kwekugadziriswa kwedhiraivho, huori hwedhiraivha kana chero zvimwe zvikonzero.
Tsigiro yekudzosera mafaira akadzimwa.
Tsigiro yekudzosera hova dzakabatana neiyo lost uye dzadzimwa mafaera.
Tsigiro yekutora dhisiki dhisiki dhisiki zvakakwana uye kutsvaga lost uye kudzima mafaera eanopfuura makumi manomwe marudzi anozivikanwa, nekushandisa yemukati nyanzvi system ine ruzivo rwakawandisa nezve hunhu uye zvimiro zvefaira rerudzi.
Tsigiro kudzoreredza mafaera akadzimwa kubva mukudzokorora bin.
Tsigiro yekuwanazve lost uye dzadzimwa maforodha uye iyo yakazara folda hierarchy achidzokorora.
Tsigira Unicode faira mazita uye dura mazita.
Tsigiro kutumidza zvakare mafaera uye maforodha otomatiki kana duplicate iripo.
Shandisa iri nyore wizard interface kukuraira iwe kuti uende kuburikidza neyakagadziriswa maitiro zviri nyore uye zvine mutsindo.
Tsigiro yekusefa uye kurongedza iyo lost uye kudzima mafaera nemafolda zvinoenderana nenzira dzakasiyana.
kushandisa DataNumen Data Recovery Kudzoreredza Mafaira pane ako Drives
Iwe unogadzira dhiraivha yako nekukanganisa, iwe wakadzima zvachose mafaera kana maforodha kubva kune ako madhiraivhu nekukanganisa, kana iwe kudurura rako rekudzokorora bhaini usati waona kuti pane chakakosha mariri. Chii chaungaite?
Hapana kunetseka. DataNumen Data Recovery inogona kukubatsira. Unogona kushandisa chishandiso chine simba kuti utarise zvinotyaira, tsvaga iyo lost uye bvisa mafaera, udzorere uye uwane iyo most data rakakosha kudzokera kwauri.
Unogona kusarudza dhiraivha kana dhisiki kuti iongororwe, wobva wadzvanya bhatani rakanzi "OK" kuenda ku start iyo yekutarisa maitiro.
Cherechedza: Usati waongorora dhiraivha kana diski, ita shuwa kuti hapana mafaera kana maforodha mudhiraivha kana diski iri kuvhurwa. Uye hapana zvimwe zvinoshandiswa zvinopinda mumotokari kana diski.
Neimwe nzira, iwe unogona kusarudza inotevera menyu chinhu:
kuverenga iyo faira refaira pane dhiraivha kana diski.
Iwe unogona zvakare kusarudza iyi menyu chinhu:
kuvhura dialog inotevera:
uye sarudza sarudzo dzekuongorora usati waitwa scan.
Mushure me starting maitiro e scan, kufambira mberi kubhawa
zvicharatidza kufambira mberi kwescan. Panguva yekuita, unogona kudzvanya
bhatani kumisa iyo scan maitiro.
Mushure mekuita scan, kana paine lost uye dzadzimwa mafaera kana maforodha anogona kuwanikwazve, iwe uchaona kuongororwa kwemafaira aya:
Tarisa mafaera kana maforodha aunoda kupora, wobva wadzvanya
bhatani, iwe uchaona inotevera dialog:
Iwe unogona kuseta dhairekitori rekuburitsa mubhokisi uye tinya "OK" bhatani kune start kudzoreredza zvinhu zvakatariswa.
DataNumen Data Recovery ichazotora zvinhu zvese zvakatariswa kwauri. Mushure mekudzoreredza, rinotevera meseji bhokisi richabuda.
Ipapo iwe unogona kuvhura dhairekitori rekuburitsa uye uwane zvese zvakadzorerwa zvinhu.
DataNumen Data Recovery 2.4 inoburitswa munaNovember 9th, 2020
DataNumen Data Recovery 2.3 inoburitswa muna Kubvumbi 14, 2020
Vandudza maitiro ekuratidzira.
DataNumen Data Recovery 2.2 inoburitswa muna Kukadzi 28, 2020
Tsigiro yekutarisa iwo ega mafaera kuti atorezve.
Tsigiro kugadzirisa saizi yekuratidzira yemifananidzo.
DataNumen Data Recovery 2.1 inoburitswa muna Ndira 8, 2020
DataNumen Data Recovery 2.0 inoburitswa munaGunyana 19th, 2019
Nyorazve scan uye yekudzosa injini.
DataNumen Data Recovery 1.0 inoburitswa muna Zvita 28, 2010
Tsigiro kune ese mafomati ekutyaira.
Tsigira unicode faira mazita uye maforodha mazita.
Tora mafaira akadzimwa pa NTFS kutyaira.